Masuul ka tirsan maamulka Shabeellaha Hoose oo shaaciyey arrin la qarinayey! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Gudoomiyaha magaalada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa shaaca ka qaaday in dagaalka Alshabaab lagula jiro ee ka socda gobolkaas ay ka qeyb qaadanayaan ciidamo cadaan ah sida u yiri.
Maxamed Xaaji Cusmaan oo ah gudoomiyaha Qoryooley ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya, kuwa AMISOM iyo ciidamo cadaan ah ay u diyaar garoobayaan dagaal baaxad leh oo ay ku qaadaan degmada Baraawe oo Alshabaab maamulaan iyo magaalooyin kale.
Diyaarado dagaal oo ay leeyihiin dalalka reer galbeedka qaarokood ayuu Maxamed Xaaji sheegay iney ka qeyb qaadan doonaan dagaalka lagu gelayo degmada Baraawe oo xarrun weyn u ah Alshabaab.
“Ciidamada dowladda Soomaaliya, AMISOM iyo ciidamo cadaan ah ayaa xoo buuxiyey Qoryooley, waxaana bilaabanaya wajiga 3-aad, waxaadna arki doontaan diyaarado dagaal oo ciidamada cadaanka ah wataan” ayuu yiri Maxamed Xaaji Cusmaan.
Wuxuu sheegay mas’uulkaan ka tirsan maamulka dowladda Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Hoose in ciidamada huwanta ah ay gaari doonaan Baraawe oo Shabeellaha Hoose ah, Diinsoor oo gobolka Baay ah, Bu’aale, Jilib iyo Jamaame oo Jubada Dhexe ah.
Dalalka Mareykanka iyo UK ayaa horay u shaaciyey in saraakiil tabarayaal iyo kuwa farsamo ah ay ka joogaan Soomaaliya, islamarkaana la shaqeeyaan ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM.
Waxaa la rumeysan yahay in ciidamada dalalka reer galbeedka ka jooga Soomaaliya ee la howlgala AMISOM ay ka tiro badan yihiin inta afka laga sheego.